Annaga nagu saabsan - Cangzhou Asc Toner Production Co., Ltd.
Cangzhou ASC Toner Production Ltd, oo la aasaasay bishii Luulyo, 2003.
Waa shirkad tignoolajiyada sare leh oo soo saarta daabacaha iyo toner-ka koobiga, kartoonada toner-ka iyo kuwa kale ee la isticmaalo xafiiska.
Waxaan had iyo jeer diiradda saarayaa ilaalinta tayada iyo ilaalinta deegaanka, oo markii hore ka gudubtay shahaadada tayada ISO9001 ee goobtan. Sida ganacsiga hormuudka ah, waxaan ka qayb qaadanay diyaarinta "Heerarka Qaranka ee Toner" sanadka 2007 abd 2014, labadaba shirkadda. iyo alaabtu waxay ku guuleystaan ​​sharafta "shirkadda farsamada sare ee gobolka Hebei" iyo "wax soo saarka tiknoolajiyada sare ee gobolka Hebei".
Had iyo jeer waxaan ku kalsoonahay "Maya ugu wanagsan, kaliya ka fiican!"Sida heerka horumarinta ganacsiga, iyo tixgelinta shirkadu "Hagaajinta iyo Hagaajinta tayada alaabta'iyo" cilmi-baarista iyo horumarinta alaabada cusub" sida dhibcaha horumarka, si tayada alaabadu u noqoto mid la sii wadi karo. Qaybaha alaabadu waxay noqon karaan kuwo qani ah, oo ay la socdaan adeegga iibka ka dib oo qumman si loo gaaro horumar joogto ah oo xasilloon oo ganacsi.
Wax soo saarkayaga sanadlaha ah wuxuu gaaraa 3000 toner toner, 800,000 pcs kartoon, 9 milyan ribbon, moodooyinka toner waxay daboolayaan koobiyeerka iyo daabacaha laserka dhammaan alaabooyinka si diiran ayaa loogu soo dhaweeyay Yurub, Afrika, Koonfur Bari Aasiya.
Cangzhou ASC Toner Production LTD oo la aasaasay.
In2004, shirkaddu waxay diiradda saaraysaa" ballaarinta miisaanka ganacsiga, hagaajinta muuqaalka shirkadda, fiiro gaar ah u yeelo hagaajinta qalabka", oo ay gelisay raasamaal badan si loo ballaariyo qiyaasta wax soo saarka.Meel cusub oo dabaq ah oo shirkad ah oo ka badan 26,000 mitir oo laba jibbaaran .oo ay ku jiraan dukaanka wax soo saarka toner cusub, dukaanka baakadaha toner, iyo kordhinta 4 khadadka wax soo saarka oo leh heer caalami ah oo heer sare ah. Wax soo saarka sanadlaha ah ayaa gaaraya 600 oo tan.
Mar kale 2007dii waxa ay maalgelisay in ka badan 600 milyan RMB, korodhka laba khad wax-soo-saar, awoodda wax-soo-saarka sannadlaha ahi waxay korodhay ilaa 1200 oo tan.
Sannadkii 2009, waxa uu 1400 milyan RMB ku maalgeliyay si loo dhiso laba aqoon-is-weydaarsi heersare ah, laba bakhaar, iyo kor u qaadista mashruuca kartoonada tonerka.
Sannadkii 2009, farsamadayada cusub ee "Qaabka jidheed ee midabka qalalan iyo habkiisa" waxay ku guulaysteen in ay ka codsadaan patent-ka Xafiiska Hantida Garaadka ee Gobolka.
Sannadkii 2010, shirkaddu waxay soo bandhigtay tignoolajiyada wax-soo-saarka sare ee caalamiga ah, waxayna ku dartay khadadka wax-soo-saarka, wax-soo-saarka sannadlaha ah ee toner-ku wuxuu gaarayaa 3000tons, iyo kartoonada toner-ku waxay gaaraan 800000 pcs. Waxaan nahay mid ka mid ah dhowr-soo-saareyaasha kuwaas oo awood u leh wax-soo-saarka PF ee toner iyo toner cartridge labadaba. .
Sannadkii 2011 ayaa mar kale kor u kacay afar xariiq oo wax soo saar ah, awoodda wax-soo-saarka sannadlaha ah ee toner laga soo bilaabo 1800 oo tan ayaa kor u kacday ilaa 3,000 oo tan.
2018, alaabadayada waxaa lagu qiimeeyay inay yihiin alaab tayo sare leh oo ku taal gobolka Hebei xafiiska maamulka tayada iyo farsamada ee gobolka Hebei.
2018, ASC laantii ugu horeysay ee dibada - laanta Ruushka ayaa laga aasaasay Moscow